amin'ny Karla M. Socci Somers
Izany matetika no mitranga rehefa manantena kely indrindra izany, fa tsy maharary ny miezaka rehefa mahita ny fitiavana ny fiainanao. Mazava ho azy, afaka mipetraka any miandry ny lehilahy na vehivavy ny nofy mba hampisehoana ny am-baravarana, na azonao atao ny alika sy ny leash mivoaha tao. Iza amin'ireo lalana araka ny hevitrao mety hitarika anao any amin'ny soulmate haingana kokoa?
Mihazakazaka amin'ny toerana tena canine mety hitarika anao ho amin'ny fitiavana vaovao. Ve ny mahita fa rehefa avy mandeha ianao, na mihazakazaka amin'ny alika, ny olona intsony ianao hoe, "Izy ka [mahafatifaty, lehibe, fluffy, namana, mamy, goofy] sy ny vahiny tonga tampoka friendlier? Marina izany, indrindra raha manana namana, alika sariaka aminao. Tsy fantatrareo izay hantsoiko faly teny an-dalana, na izay mety nihazakazaka nankany ary hanomboka licking. Mitandrema fa. Ny alika dia mpitsara ny toetra amam-panahy lehibe. Raha ny momba ny mety ho faly ny fitiavana fahalianana, mety ho, koa.
Ny fananana ny alika dia midika fa ianareo dia tsy irery mihitsy. Ampiasao fa ny tombony ianao raha hafahafa ny fanatrehana hetsika irery. Naka ny alika ny fety an-kalamanjana, ohatra, mampitombo ny vintana ny fihaonana iray ny tena fitiavana - na farafaharatsiny, olona mba mifanerasera aminy izay mahafinaritra sy tia alika tahaka ataonao. Maro ny zava-kanto, na ny mozika ivelan'ny trano fety, na ny zava-mitranga any an-toerana ny zaridaina, mandray rehetra efa-legged namana.
Hevitra iray hafa noho ny namelany ny pooch mitarika anao ny paramour: mandray lalana vaovao. Raha mandeha matetika azy manodidina ny manodidina, na eny amin'ny lalana iray ihany, any an-toeran hafa. Ny alika ho tia manadihady ny tontolo iainana sy ny sniffing vaovao avy amin'ny vaovao rehetra ianao raha mandray fofona ao ny toerana manodidina (I.E. hafa tokan-tena teny an-dalana). Misangy ny olona rehetra izay mihaona, ary aoka ny alika manao ny fampidiran-dresaka ho anao. Mahagaga, dia ny mamela Rover hitondra ny fotoana nanjakan'i (na ny leash), Mety fotsiny dia hitarika anareo ho any amin'ny olombelona ny nofy.